သောသီခို: မောင်ချစ်သူ၊ ဖားနွီး လက်အောက်ခံ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ မြိုင်ကြီးငူဒေသ တခေါ်ဖိုး ဒီကေဘီအေ စခန်းကို တက်သိမ်း (HOT News)
မောင်ချစ်သူ၊ ဖားနွီး လက်အောက်ခံ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ မြိုင်ကြီးငူဒေသ တခေါ်ဖိုး ဒီကေဘီအေ စခန်းကို တက်သိမ်း (HOT News)
ယနေ့ နေ့ လည်မွန်းလွဲ တစ်နာရီအချိန်တွင် မောင်ချစ်သူနှင့်ဖားနွီးလက်အောက်ခံ BGF နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ ဝင်များက မြိုင်ကြီးငူဒေသ ဗိုလ်ဘိ လက်အောက်ခံ တခေါ်ဖိုး ဒီကေဘီအေ စခန်းအား ၀င်ရောက်ပစ်ခတ် သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင် နှစ်ဖက် ကျဆုံးမှု အတိအကျ မသိရသေးသော်လည်း BGF နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ ဝင်မှ ဒီကေဘီအေ သေနတ် အလက်(၂၀) သိမ်းဆည်းယူသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ယခုဖြစ်ပွားသည့်တိုက်ပွဲနှင့်ပါတ်သက်၍ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှ ဒီကေဘီအေ ကိုသော်လည်းကောင်း ကေအဲန်ယူကို သော်လည်းကောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပဏာမ လက်မှတ်ထိုးမှုများအဆင့်အထိတိုးတက်မှု များရှိခဲ့သော်လည်း ဗမာ့တပ်မတော်မှ ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေကို ဒီကေဘီအေ စခန်းအားသွားရောက်တိုက်ခိုက်အမိန့် ပေးခြင်းသည်က ကရင်လူမျိူးတွေ ကို စနစ်တကျ သွေးခွဲပြီး ရာသက်ပန်ကျွန်အဖြစ်သွတ်သွင်းရာ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတစ်ဦးက သုံးသပ်ပါသည်။
ဒီကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်၍ ဗိုလ်မှူးစောလားဘွယ်ဦးဆောင်တဲ့ ဒီကေဘီအေနှင့် KNU ကရင်အမျိူးသားအစည်းအရုံးတို့ ဗမာအစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စများ အခြေနေမှန်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ တဖက်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးစကား ကမ်းလှမ်းပြီး တဖက်မှာ ကရင်အချင်းချင်းကို သွေးခွဲ တိုက်ခိုက်ရန် စေခိုင်းချင်းသည် လူယုတ်မာ တို့ ၏ လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းပေါ်လွင်လှပါသည်။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် ဒီကေဘီအေရော ကေအဲန်ယူပါ ဗမာအစိုးရကို ပြန်ထထိုက်ဖို့ အလားအလာတွေက များနေတယ်လို့ စစ်ရေးလေ့လာသူတစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
သတင်းပေးပို့ သူ- မြစ်ဆုံမင်း
၁၉၊ ၀၂၊ ၂၀၁၂
hay.. lar way.. maung yo ..hay.. lar way maung yo..once more nae.. thaw.. thaw.. nyan...way..war..way..war..it's my pleasure.it is very tasty when the people who said themselve karen are fighting each other, saying bad thing to their owne people and leader.come on come all.i like this.that why our eldely person said(kayin min htain kway ta ming)it's truely true.see? these people are bloody fool ,controless until they can''t see and findagood thing to their owne people and leader.can they have their owne land and freedom as they are seeking and asking for?ha ha ha ,and they hasaslave soul either.thaw thi kho's edatior, i like that, man. you are right.come on i like to see and read it more.and if their leader are too bad as they said 'i am so scare to think about the other who follow them and the parson who said themsalve karen and has karen blood.h ha ha haa we must be very carefully of these people.these people are amazin!!!!!!!
yep yep yep man.you are right.it'sagood dinner for us.if the people who does't seeagood thing to their owne people they are gooing so so far and useless.i never seen that kind of thing in other nationalty and ethnic.kachin does't say their people and leader is too bad and other ethnic nither.if something wrong with their leader or owne problem they solving it in silent but ,karen.do u know why?if u know be quiet men.this isasecret.ha ha ha
Right, this is the way of our Karen people polities secret. Don't be reveal for other ethnic to see this hidding way to defeat the adversary. This is one of the best strategist.
It is like Burmese government give them bone and they try to get that bone.
i can't recommend that kind of people to karen natinality and ethnic men.if the karen blood are flow in ther body, they can't be like that.these people are not really karen.so you need to be very carefull with your words men.it's very dangerous for you.i don't know who you are,wher you are.but you know your self well and preay to do not meat me .i just want to see you at front better line.no metter who you are.you smeel look likeadead body already.